Iteksi yekamva yinxalenye yangoku (III): myTaxi | IPhone iindaba
Emva kokuthetha kwizavenge ezibini zokuqala zale miniseries malunga nezicelo ezibini ezingenanto yakwenza neteksi eqhelekileyo, ngoku lithuba lomntu ofuna ukuphucula iiteksi zobomi bonke. Uhlelo lokusebenza iteksi Yeyona mpendulo ilungileyo kwihlabathi leeteksi kwabanye abachasi, kwaye inyani kukuba ayilunganga kwaphela. Siza kuyihlalutya ukuze sibone ubuhle kunye nobubi bayo ngokujolisa kwiinkcukacha ezibalulekileyo.
1 Iteksi yale mihla
Iteksi yale mihla
Isiseko sale app ngu iteksi yobomi bonke, kuba ziya kuba zizithuthi esizisebenzisayo ukuhamba xa singena kwisivumelwano sokuhamba. Ngokumalunga nenkqubo yokulawula uhambo, yonke into ifana ngokufanayo nakwezinye ii -apps ezinje ngeUber okanye iLyft, kubandakanya ukuhlawulwa ngeselula kunye nokulula kokuyilawula, ukwamkela ukongeza kwintlawulo yemveli ukubanakho ukuhlawula zombini ityala okanye ikhadi lebhanki kunye I-PayPal ngokusebenzisa iapp.
Xa kuthelekiswa nezinye iindlela zala maxesha ezinje nge-Uber kunye neCabify, i-MyTaxi inenzuzo enokuthi inomdla kwabanye abasebenzisi: ngokusebenza phantsi kweeteksi zesiko, izithuthi zingahamba Imizila yeetaxi, into engavunyelwanga zizithuthi zabakhweli ezingoonoteksi. Le ithiyori iguqulela ekufikeni kwindawo eya kuyo ngaphambili.
Ukusebenza kwenkonzo ngokwexesha Kuhle kakhulu. Kwizixeko ezikhulu, ukufika kweeteksi kwindawo yethu kukhawuleza kakhulu kwaye akuyi kubakho mfuneko yokuba silinde, into exatyiswa kakhulu, nangona kufuneka iqatshelwe into yokuba emva kokusebenzisa okuthile sidibene noqikelelo lokufika olungaqondakaliyo, nangona oku kuqhelekile kolu hlobo lwezicelo.
Umsebenzi weCalculator esinokuwufumana kuseto lwesicelo unomdla kakhulu, njengoko usivumela ukuba siwufumane Ixabiso eliqikelelweyo lohambo kwaye ihlala isondele kwinyani, nangona inokwahluka ngokwemihla yemihla ngemihla.
Kwinqanaba lonxibelelwano akukho nto iphikisayo, ichanekile kakhulu, ngemibala ecocekileyo kunye nokulula okufunekayo kokusetyenziswa kolu hlobo. Ngokunjalo, ukusebenza ngawo onke amaxesha kufanelekile, ngaphandle kokulahla kwalo naluphi na uhlobo kunye nokuhlaziya ngokuchanekileyo ngawo onke amaxesha okoko nje sinenethiwekhi esebenzayo okanye iWiFi.
Qaphela malunga nobhaliso: Unokwenza ubhaliso oluqhelekileyo ngaphandle kwekhredithi yokuthengisa, okanye kungenjalo ufumane imali yasimahla kuhambo lwakho lokuqala ngokufaka ikhowudi "carlos.san57".
SIMAHLA NGOKU (iteksi)Mahala
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Iteksi yekamva yinxalenye yangoku (III): myTaxi
IPodcast 8x22: Ulindelo lukhula kunye ne-iPhone 8